Madaxweynaha oo kulan la qaatay Wakiilka midowga Afirika ee Soomaaliya – idalenews.com
Madaxweynaha oo kulan la qaatay Wakiilka midowga Afirika ee Soomaaliya
Madaxweynaha jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Mr. Mahamat Anadif Saleh, ayadoo madaxweynuhu uu soo dhaweeyay tallaabadii uu xafiiska howlgalka Midowga Afrika uu ugu soo guuray magaalada Muqdisho.
Wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika ayaa madaxweynaha uga warbixiyay xafiiska Midowga Afrika ee Muqdisho iyo sida uu Midowga Afrika ugu heelan yahay taageero uu siiyo dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa soodhaweeyay in xafiiska Midowga Afrika loo soo raray Soomaaliya, wuxuuna ku tilmaamay dhacdo taariikhi ah, “waxaan muujinayaa baahida ay Soomaaliya u qabto in la soo celiyo xiriir wanaagsan oo shaqeynaya oo aan la yeelano Midowga Afrika iyo dunida inteeda kale, taas oo qeyb ka ah siyaasaddeyda lixda Tiir ku dhisan, sidaas darted waxaan soo dhaweynayaa imaanshaha Muqdisho ee xafiiska howlagalka Midowga Afriga ee Soomaaliya” ayuu yiri madaxweynuhu.
Madaxweynaha ayaa tallaabadaan ku tilmaamay mid kor u qaadeysa in diplomaasiyiintu ay yimaadaan magaalada Muqdisho, taas oo calaamad u ah kobaca iyo kalsoonida lagu qabo nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya, wuxuuna caddeeyay in tallaabadani ay xoojineyso xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Midowga Afrika.
Ergoyinka Shirweynaha Maamul usameynta Jubboyinka iyo Gedo u matalaya gobolka gedo oo 3 Airport laga soo qaadayo
Iiraan oo beenisay inay Alshabaab shixnado hub ah u soo daabuleen